musha > Travel Europe > 10 Best Cafes For The Best Coffee In Europe
Europe unobereka uye unopisa chisinganzwisisiki mari kofi, ine yakanakisisa kofi zvitoro uye cafes mu Europe. Iyo mecca yeanoda kofi uye kutaura chokwadi, kwazvo kupfuura chete kuti. Cafe tsika chinhu hwindo kunyika. Titsvake kofi zvitoro kupfuura isu shanyira dzinonakidza mamiziyamu, sezvivako, temberi, uye machechi! Chii wakaramba Paris, Vienna, uye Italy kuva pasina zvavo enviable Datenroku tsika?
Heano 10 Best Cafes For The Best Coffee In Europe!
Coffee uye cafes batanidza isu. We sveta uye zvakanaka, kuvavamba dzinonakidza veko kana vadiwa, uye patsanura kubva mukunyongana kwehupenyu hwemazuva ano. Ndiwo mushonga negoho.
Kune mazana yakanakisisa kofi zvitoro mu Europe ukoshi achishanyira, izvi ndizvo kusarudzwa zvatinotenda tiri 10 Best Cafes For The Best Coffee In Europe:
Izvi kofi chitoro rinoisa hudyu mu hipster. Zvinonzi anazvo pedyo 25 egore ndiani anoda kofi bhinzi. Iye akanyatsokopwa nyanzvi unyanzvi kutanga blends ake. Yochinja pamwe mwaka saka kuva nechokwadi kuti vanomubvunza chii kuitika sanganisa iri.
Kuti mukwanisi izvi kutobaya brews, dzakasiyana-siyana mukaravhani nezvikafu zvishoma anowanikwa kutengwa. Gondo nechigaro, nakidzwa mahwindo guru kuti regai Hova chiedza uye uone nyika kuenda. Zvechokwadi ichi ndechimwe yakanakisisa kofi zvitoro mu Europe.
Art deco ndiye Vakamupfekedza werudzii Cafe Odeon muna Zurich. Izvi Classic bohemian akazarura mikova ayo 1910 uye inozivikanwa ari dambiro evanyori, vadetembi, musicians, uye vakadzidza. Vamwe vakawanda Vashanyi akakurumbira dzinosanganisira Albert Einstein uye Picasso.
Izvi akare-chikoro European runako vaine ceilings, brasserie Fittings, inoratidzirwa madziro, uye vakamirira vakapfeka zvine mutsindo.
A egungwa-akafuridzirwa kofi shop Paris ndizvo zvaunofanira kuwana kana ane Aussie uye Frenchie kutanga kofi chitoro, mune rimwe remaguta ane mukurumbira kofi-ane hanya munyika. Zvinova pandandanda kofi zvatinokwanisa zvitoro mu Europe.
O Coffeeshop hainyadzisi nevamwe favorite kusanganisira noisettes, nguwani, uye vachena vakapfava. Eggs Benedict ari showstopper, saka iva nechokwadi kuti arayire nayo!
Vienna ane akapfuma kofi tsika nhoroondo; vanhu congregating uye kukurukura zvematongerwo enyika, chitendero, uye sayenzi. Writers nevafungi sipping kuti bika akakwana pakukurukurirana zvakadzama kwouzivi. Not zvachinja zvikuru kubva kare mazuva nhasi uye ndiye mumwe wedu kufarira zvakanaka kofi zvitoro mu Europe.
Cafe Schwarzenberg ndiyo yakanaka kofi shopu muVienna. Hazvina chinyakare, kunaka, uye zvakakwana photogenic kune yako inotevera mukuru Instagram mufananidzo, #kofi.
5. kweBrussels: Mug
Nemhaka establishments akadai Mok, KweBrussels ari kuwana gwapa wayo yakanakisisa kofi zvitoro mu Europe mepu.
Ivo ndagocha dzavo kofi bhinzi pachavo iyo anoshandura nayo kuva chemhando yepamusoro.
Zvokudya vakashumira panguva Mok ndiye zvose miriwo madhishi, apo iwe kunwa inonaka sandara chena, unogona Tuck kupinda inotapira Porridge ne nzungu, bhuratifuru, mutamba, uye kueche yogati.
6. Itari: Milano Roastery
Starbucks kuItaly? Zvinofadza zvakaipa uye asi, ndizvo zvakanaka. Espresso chipo Milan akapa nyika uye Milano Roastery inobhadhara mukukudza kuti tsanzira zvisikwa.
It chakazonzi yemitambo kofi. Chaizvoizvo ane nzvimbo iri kofi zvatinokwanisa zvitoro mu Europe pryslys. nzvimbo uyu kupemberera netsika kofi uye ane anoravira kamuri ezvinhu-of-nounyanzvi Roastery. Funga Willy Wonka vanokupa kofi.
The Copenhagen Coffee Lab duku uye cheni kuvhiyiwa kuti ari kuita mafungu makuru ari kofi indasitiri. Zvinonzi zvakasimba achiva mumwe yakanakisisa kofi zvitoro mu Europe. The Copenhagen Coffee Lab mutendi yakasimba yechitatu chinozunguzirwa kofi tsika. Izvi zvinoreva kuti havana kukoshesa kofi sezvo emhizha kana raanoziva chinwiwa uye zvakajeka kuti chinoita zvose musiyano.
Varidzi Kaffeine akafamba kuAustralia uye New Zealand uye vakawana kurudziro yavo nokuda kofi chitoro kuti aigona kuzarura muLondon. Kurota yavo yakazadzika uye akavhura imwe yakanakisisa kofi zvitoro mu Europe.
Sezvo navazhinji kofi zvitoro mu Europe, zvokudya chikamu ruzivo uye Kaffeine hakuna Kunze. Salads, sandwiches, uye chero chinhu chinopisa kubva muchoto chiri pane menyu.
9. Edinburgh: bika Lab
In Edinburgh, iyo Brew Lab iri pa-maitiro uye ndeimwe yeakanakisa zvitoro zvekofi muEurope.
Brew Lab's yakasarudzika ine vanhu vanorovera pamikova yavo zvimwe. Dzavo kofi Muterere ndiyo testamendi kwavo chido.
Mupepa zvina kutenderera kuroora-mavambo coffees. Two kunge brewed kwavo bika kamwechete uye vamwe vaviri avo espresso kamwechete. Coffee maviri deliciously chete keke kana pastries, izvo bika Lab ane haazivani.
10. Prague: zvakasiyana
Modern, kupenya, uye ane hupenyu, Misto kunotodiwa.
Zita riri Czech kuti, Panzvimbo. dzakagadzirirwa wavo akapfuma kofi zvinwiwa uye zvinonaka chikafu.
Zvisinei nguva, chisvusvuro, masikati, kana kudya kwemanheru, Misto ndigokugamuchirai mumagadzirirwo wechokwadi uye kuti iwe chokwadi kuwana kwenyu zvine caffeine parumananzombe.
Akanakidzwa nyaya yedu “10 Best Cafes For The Best Coffee In Europe”? Book pamwe Save A Train uye kutanga kwako kofi Datenroku tsika rwendo!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Best Cafes For The Best Coffee In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / ja kana / kes uye mimwe mitauro.
Datenroku cafelover coffeeculture TravelBrussels TravelLondon TravelMilan travelparis TravelVienna TravelZurich